कुकुरहरूका लागि प्रोजाक: तपाईंलाई आफ्नो पाल्तु जनावरहरूलाई औषधी दिने बारेमा के जान्नु आवश्यक छ - घरपालुवा जनावर | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन स्वास्थ्य कल्याण समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार घरपालुवा जनावर कम्पनी औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट औषधि बनाम मित्र कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, समाचार
मुख्य >> घरपालुवा जनावर >> प्रोजेकमा तपाईको कुकुर राख्ने कुरा तपाईलाई के चाहिन्छ
अमेरिकामा धेरै तनाव छ - र तपाईंको घरपालुवा जनावर प्रतिरोधात्मक छैन। यो सहि छ, तपाईंको पिल्लामा चिन्ता हुन सक्छ। गम्भीर अवस्थाहरूमा यसलाई औषधीको साथ उपचारको आवश्यक पर्दछ, कुकुरहरूको लागि प्रोजाक जस्ता। उत्तरी भर्जिनियाका पशु चिकित्सक र कुकुर संसारको स्वयं घोषित मनोचिकित्सक डा। एमी पाइकका अनुसार विगत केही दशकहरूमा कुकुरहरूमा चिन्ताको निदानको वृद्धि भएको छ।
संयुक्त राज्यमा, million 45 करोड घरमा कम्तिमा एउटा कुकुर छ। त्यो पछिल्लो भन्दा बढि कुकुरको स्वामित्व नम्बर हो अमेरिकी पशु चिकित्सा चिकित्सा संघ सन् १ 198 2२ मा पहिलो मापन शुरू भयो। समग्रमा क्यानाइन चिन्ताको व्यापकताको बारेमा कुनै राम्रो अध्ययन गरिएको छैन, तर डा पाइक भन्छन् कि आवाज बिरूद्ध अध्ययनले देखाउँदछ कि dogs०% dogs–०% कुकुरसँग आवाज फोबिया । यसले बर्खास्त ट्रकको डर र आँधीबेहरीको समयमा आतंक जस्ता व्यवहार समेट्न सक्छ।
तिनीहरूका घरपालुवा जनावरहरूलाई मद्दत गर्न, केहि मालिकहरूले एन्टिडिडप्रेसन्ट औषधिहरू जस्तै फर्काइरहेका छन् प्रोजाक ( फ्लुओक्सेटीन )। TO २०१ national राष्ट्रिय बजार सर्वेक्षण सुझाव दिन्छ कि कुकुर मालिकहरूको करीव १०% आफ्नो पाल्तु जनावरहरूलाई एंटी-चिन्ता औषधी दिन्छन्।
कुकुर प्रोजाक भनेको के हो?
जब पशुचिकित्सकहरूले कुकुरहरूको लागि प्रोजाक (फ्लोक्सेटिनलाई जेनेरिकको रूपमा) लेख्छन, यो उही औषधी हो जुन तपाईं आफ्नो चिकित्सकबाट यस्तै मुद्दाको लागि प्राप्त गर्नुहुनेछ — बिभिन्न खुराकमा मात्र। यो छनौट गरिएको सेरोटोनिन रिअपटेक अवरोधक (एसएसआरआई) हो, यसको मतलब यसले तपाईंको शरीरलाई सेरोटोनिनलाई रिबोर्सब गर्नबाट रोक्दछ। जब यो न्युरोट्रान्समिटरको स्तर मस्तिष्कमा उच्च हुन्छ, यसले मुड सुधार गर्ने सोच्दछ। के तपाईंको कुकुरलाई एन्टी-फिक्सी औषधी चाहिएको छ?
एन्टी-चिन्ता मेड्स भन्दा पहिले, तपाईंको पशु चिकित्सकले एक मेडिकल कारणलाई इन्कार गर्न आवश्यक छ। कुकुर चिन्ता आन्तरिक मुद्दाहरू द्वारा सुरु गर्न सकिन्छ जस्तै एलर्जीको कारणले चिडचिड वा ओस्टियोआर्थराइटिसले गर्दा हुने दुखाइ।
एक पटक अन्तर्निहित अवस्था खारिज भएपछि, पशु चिकित्सकहरूले तपाईंको कुकुरको सामाजिक र वातावरणीय इतिहास र चिन्ता एपिसोडहरू मूल्या assess्कन गर्नेछ। डा। पाइक भन्छन्, यो 'सधैंको लागि' पत्ता लगाउने बारेमा कहिले हुँदैन, तर कसरी अगाडि बढ्ने। निदान - जस्तै व्यक्ति र कुकुरहरूसँग डरा-आधारित आक्रमकता - एक निदानपछि हुनेछ। औषधी र व्यवहार परिमार्जन सहित एक उपचार योजना पनि बनाइनेछ।
हल्का चिन्ताका कुकुरहरूका लागि , डा। पाईकले प्राकृतिक शान्तिको फेरोमोन र पूरकहरूको सिफारिश गर्छन्। यसमा Adaptil फेरोमोन स्प्रे वा कलर र Anxitane S जो एक L- theanine सप्लीमेन्ट छ जुन एक chewable उपचार मा आउँछ।
अधिक तीव्र चिन्ताको साथ कुकुरहरूका लागि, उनीले प्रोजाक (फ्लोक्सिटाइन) सिफारिस गर्छिन्। लेक्साप्रो वा Zoloft सामान्यतया प्रयोग हुने अन्य नाम ब्रान्ड साइकोट्रपिक औषधिहरू हुन्। त्यहाँ एक एफडीए-अनुमोदित संस्करण पनि छ फ्लुक्सिटाइन विशेष गरी कुकुरहरु लाई पुनः मिलाउने भनिन्छ। डा पाईकलाई यो संस्करण मनपर्‍यो किनकि यो स्वादयुक्त च्यू ट्याबमा आउँदछ जुन प्राय कुकुरहरूले उपचारको रूपमा लिनेछ।
(र हो, तपाईं आफ्नो एकलकेयर कार्ड कुनै पनि औषधीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको पशु चिकित्सकले तोक्छ जुन मानव-आईडिया, प्रोजाक, लेक्साप्रो 80 लाई पनि to०% सम्म बचतको लागि तोकिन्छ)।
योजना बी कती लामो हुन्छ पछि तपाइँ यसलाई लिनुहुन्छ
प्रोजाकले कुकुरहरूमा काम गर्न कति समय लिन्छ?
चार हप्ताको चिन्हमा, औषधिले लात हाल्छ र [र] मस्तिष्कमा हामीलाई आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न थाल्नेछ, डा पाईक भन्छन्। करीव %०% कुकुरलाई फरक औषधिमा बदल्न आवश्यक पर्दछ, जस्तै लेक्साप्रो वा जोलोफ्ट, यदि प्रोजाकले काम गरेन भने।
कुकुरहरूका लागि प्रोजाकका साइड इफेक्टहरू के हुन्?
कुनै पनि साइड इफेक्टहरू सामान्यतया जठरांत्र — बान्ता, पखाला, र भोकको अभाव हुन् - जुन डा। पाईकले साइकोफार्मास्यूटिकल्सलाई सकारात्मक प्रतिक्रियाका साथ कुकुरमा एक वा दुई दिन मात्र चलेको बताउँछन्।
तपाईले औषधि भन्दा टाढा के गर्नु पर्छ?
डाईक चेतावनी दिन्छन् कि औषधि एक जादू की छडी होईन जो एक अन्तर्निहित डिसआर्डरको उपचार गर्दछ। अन्तर्निहित भावना बदल्नको लागि जुन कुकुरको व्यवहारलाई ड्राइभ गर्दैछ, थेरापी कुञ्जी हो। व्यवहार परिमार्जन बिना, डा। पाइक भन्छन्, यो धेरै सम्भावना छैन कि कुकुर कहिले पनि मेडबाट बाहिर आउँदछ।
र अनुसन्धान बाहिर कि दिन्छ। बेलायतको लिंकन विश्वविद्यालयमा पशु चिकित्सा व्यवहार प्राध्यापक डेनियल मिल्सले लेखेका थिए २०१ study अध्ययन प्रोजाक र घरपालुवा जनावरहरू कि लागूऔषध र एक व्यवहार संशोधन कार्यक्रम प्रभावी उपचारको लागि आवश्यक थियो।
डा। पाइक, जो उत्तर अमेरिकामा 70० भन्दा कम बोर्ड-प्रमाणित पशु चिकित्सा व्यवहारकर्ताहरू मध्ये एक हुन्, परिवर्तनलाई सजिलो पार्न औषधिहरू प्रयोग गर्दछन्। औषधिले डरको तीव्रता र ब्यवहार गर्ने उत्तेजनालाई घटाउँछ। त्यसोभए, एक पटक कुकुरको डर दह्रोता कम भयो भने, एक ट्रेनरले कुकुरलाई वैकल्पिक तनावपूर्ण तालिमको स्थितिमा सिकाउन सक्छ। पाइकले भन्छ उनी धेरै काम गर्छे मालिकलाई कसरी उनीहरूको कुकुरको व्यवहारलाई कसरी व्यवहार गर्ने भनेर सिकाउने बारेमा।
उपचार समयरेखा कुकुरलाई कति पनी पीडा हुँदै आएको छ। डा। पाइक सल्लाह दिन्छन् कि धेरै बर्ष देखि व्यवहार चलिरहेको छ उपचार को लागी मिनेट को संख्या को बराबर।
यदि तपाईं आफ्नो कुकुरलाई उपचार योजनामा ​​लाउन तयार हुनुहुन्छ भने, आफ्नो पशु चिकित्सकलाई पशु चिकित्सा व्यवसायीलाई सिफारिस गर्न भन। र सबैभन्दा माथि, डा। पाइक चेतावनी दिन्छन्, तपाईले आफ्नो कुकुरहरु लाई आफ्नै चिन्तापत्रहरु सहित कहिले औषधि पठाउनु हुँदैन।
सबैभन्दा राम्रो मांसपेशी आराम गर्ने के हो?
जोलोफ्टमा हुँदा आइपुप्रोफेन लिन सुरक्षित छ?
तपाइँ काउन्टर मा 800 मिलीग्राम ibuprofen प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
तपाइँ कहिले सम्म संक्रामक हुनुहुन्छ जब तपाइँ फ्लू हुनुहुन्छ?
Vagisil विरोधी खुजली क्रीम कसरी लागू गर्ने
एन्टिबायोटिक पछि निमोनिया कति समय सम्म संक्रामक हुन्छ
amitiza को लागी काम सुरु गर्न कती समय लाग्छ?
काउन्टर मा भिटामिन डी 50 000 एकाइहरु